Shiinaha BONOVO wuxuu si madaxbanaan u naqshadeeyay oo u soo saaray baaldi baaritaanka wareega oo ku habboon warshad wax soo saarta 1-50t iyo alaab-qeybiyeyaal | Bonovo
BONOVO si madax-bannaan ayaa loo naqshadeeyay loona soo saaray baaldi baaritaanka wareega ah oo ku habboon qodayaasha 1-50t
Bonovo Rotary Screening baaldi waxaa loogu talagalay inuu noqdo mid adag oo kordhiya wax soo saarka. Drum-ka baaritaanka wuxuu ka samaysan yahay bir adag oo silig ah oo wareegsan.
Shaqada Bonovo Wareejinta Baaritaanka baaldiga ayaa si fudud u kala sooca ciidda iyo qashinka, adoo miiqaaya Drum-ka Baadhitaanka. Tani waxay ka dhigaysaa habka kala shaandhaynta mid dhakhso badan, ka fudud, oo waxtar badan.
Xuduudaha culeyska badanaa la isticmaalo:
NOOCA Maaddi HEL CODSIGA
Nadiifinta baaldiga Q345B & NM400 \_ Loo adeegsaday nadiifinta shaqada kanaalka iyo boholaha.
Qalfoofka Qalfoofka Q345B & NM400 Adabtarada, Ilkaha, magaabay Side /
ilaaliyaha Lagu dabaqay isdhexgalka iyo xoqida
oo ah alaab dabacsan.
Janjeeri God jeexdin Q345B & NM400 \_ Loo adeegsaday nadiifinta shaqada kanaalka iyo boholaha.
Baaldi Q345 & Hardox450 Adabtarada, Ilkaha, magaabay dhinac Lagu dabaqay isdhexgalka iyo xoqida
XUSUUS: OEM ama Waxsoosaar La-Beddeli Karo Oo La Heli Karo
Baaldiyadaha baaritaanka wareega ee Bonovo ayaa ah kuwa ugu badan ee suuqa kala duwan, oo loogu talagalay inuu la qabsado dhammaan noocyada mishiinnada. Waxay ku qalabaysan yihiin guluubyo qaab isku beddeli kara si ay ula kulmaan sharuudaha looga baahan yahay baaritaanka shaqada.
Waxay ku habboon tahay badbaadinta isku-darka dhismaha iyo dhismayaasha goobaha dayactirka, xulashada waxyaabaha qashinka ah ee goobaha duminta, iyo kala soocidda qashinka dabiiciga ah ee goobaha qashin-qubka, iyo sidoo kale raridda baqshadaha xakamaynta iyo dhuumashada dhuumo ku jira shaqada dhuumaha. Baaldikan baaritaanka wareegga ee hidda-socodka ayaa ku habboon shabaqa is-weydaarsiga la isku-beddeli karo, kaas oo lagu heli karo cabbirro kala duwan, isla markaana ay fududahay in la beddelo geesaha xirxiran si loo yareeyo waqtiga loona yareeyo wax-soo-saarka.
Xuzhou Bonovo waa shirkad xirfadlayaal ah oo iskuxidhaysa R&D, waxsoosaarka iyo iibinta lifaaqyada mashiinada dhismaha. Laga soo bilaabo adeegsadayaasha dhammaadka iyo wada-hawlgalayaasha OEM, ilaa ganacsadeyaasheena, Bonovo waxay sumcad ku yeelatay tayo gaar ah iyo adeegga macaamiisha Waxaan la dhisnay iskaashi adag adduunka - caan ka ah adduunka caan ka ah baayacmushtariyaasha sida OEM ee taageeraya ka shaqeynta iyo waxaan u fidinnay adeegyo taageero soo saareyaasha gudaha iyo dibaddaba. Ku lifaaqyadeena oo inta badan loo soo saaray qodista iyo rarka si ay si buuxda ula kulmaan baahiyaha kala duwan ee dhismaha mashiinada injineernimada iyo xalka ugu fiican ayaa la siin karaa dhammaan noocyada shaqada dhulka.
Hore: Bonovo cusub oo loo qaabeeyey oo leh hawl kale oo dhagax jabis ah oo ah 2 ilaa 85 tan ripper
Xiga: Bonovo baaldi-baaldi culus oo baaldi ah oo lagu qodayo xaaladaha dhulka ee daran ee dhagaxu ku badan yahay
J: Waxaan ku soo saarnaa alaabtayada gudaha. Adeeggeena macmiilku waa mid gaar ah oo shakhsi u ah macaamiil kasta. Wax soo saar kasta oo BONOVO ah waa mid gaashaaman oo adkeysi leh oo leh dammaanad dhisme oo 12-bilood ah. Waxaan u adeegsannaa waxyaabo tayo sare leh oo laga soo qaatay kuwa ugu fiican Shiinaha. Kooxdayada qaabeynta waxay si dhow ula shaqeeyaan macaamiisha wixii amarro qaas ah.
360 baaldi digrii
Baaldi qodaya 360 degree
baaldi qoda shaashadda
baarista baaldi qodista 20t
shaashadda baaldi qoda
baaldi baaritaanka wareega ee hawo-qodista
baaldi baaritaanka wareega ee baaldiidka
baaldi qodax baaldi
qodista baaldi baaritaanka wareegaya
Baaskiilka Baarista Qodista
baaldi shaashad flip
shaandho baaldi beerta
baaldi baaritaanka hawo-biyoodka
baaldi shaashadda wareega wareega
baaldi baaritaanka haydarooliga
baaldi baaritaanka qodista weyn
Mini Qodista Wareegtada Baaldiga
baaldi baaritaanka wareega ah
Qodobo baaldi shaashad yar ah
baaldiga shaashadda bixiyeyaasha
qod baaldi Rotary
shaashadda baaldi wareegaya
Baaldi baaritaanka Rotary
baaldi baaritaanka wareegaya
baaldi wareeg ah
baaldi dhoobo rooti
Qodista baaldi shaashadda
koofiyadaha baaldi shaashadda
baaldi baaritaanka qodista
baaldi baaritaanka qodista 3 tan
baaldi baaritaanka loogu talagalay isteerinka barafka
baaldi baaritaanka skidder
baaldi baaritaanka ee xamuulka skiller
baaldiyo baaritaanka gawaarida gawaarida
baaldi qodista baaritaanka
qodista baaldi baaldi
Baaskiil Istaraatiijiga Istaraatiijiga ah
qodayaal tayo sare leh baaldi shaashad wareegaya
BONOVO SANDUUQ QAABKA jabiyaha Haydarooliga jabkii roma ...
BONOVO adeegga OEM pulveriz la taaban karo farsamo ...
Warshad Bonovo iib toos ah baaldi-shaqo ba'an-ba ...
BONOVO kooxda jebiyaha Excavator Haydarooliga Jabiyaha ...
BONOVO wheel shaqo isafgaradka nolosha dheer ee al ...
BONOVO warshad iib toos ah loader dhulka hoostiisa b ...